चैत २१, २०७३ सोमवार १३:४४:०० प्रकाशित
अधिकांश महिलालाई थाह छ यो पीडा र प्रक्रिया। तर, बच्चा जन्मिनासाथ छोरा कि छोरी भनेर अनावश्यक कौतुहलता दर्शाउने तिनै महिना देख्दा अचम्म लाग्छ। 'ए, फेरि पनि छोरी नै पो' भनेर खिन्नता व्यक्त गर्ने पनि नारी नै धेरै भेटेकी छु। छोरी जन्मिएपछि मुख खुम्च्याउँदै खिसी गर्ने नारीहरुले कसरी बिर्सँदा हुन् आफूले भोगेको पीडा? किन छोरीको आगमनलाई यति सस्तो प्रतिक्रियाले स्वागत गर्छन् नारीहरु नै? यस्ता प्रश्नमा घोत्लिँदा खेरि लाग्छ, नारीलाई कमजोर बनाउने त नारी पो हुन् कि?
हामी किन सोच्न सक्दैनौँ कि सबैभन्दा पहिला हामी मान्छे हौँ? त्यसपछि मात्र बल्ल हामी नारी र पुरुष हौँ। आखिर हाम्रो जीवन अनिश्चित छ। त्यसैले अरुको पनि भलो सोचेर जीवन बगैँचामा फुल्ने प्रयास गर्नुपर्ने होइन र? आखिर फुल्ने र झर्ने प्राकृतिक नियमको नियती त हामी जोसुकैले भोग्नु नै छ।
(बगाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एमएससी नर्सिङ अध्ययनरत छिन्)